कालिका नगरपालिकाको वडा नं. १ लाई सिंचाईलाई प्रमुख प्राथमिकता दिन वडाबासीले सुझाव – Mukundasen Television
कालिका नगरपालिकाको वडा नं. १ लाई सिंचाईलाई प्रमुख प्राथमिकता दिन वडाबासीले सुझाव
| २ जेष्ठ २०७६, बिहीबार २२:४३ , प्रकाशीत
कालिका नगरपालिकाको वडा नं. १ लाई आर्थिक वर्ष २०७६ /०७७ मा सिंचाईलाई प्रमुख प्राथमिकता दिन वडाबासीले सुझाव दिएका छन् । नगरपरिषदलाई लक्षित गरेर वडा नं. १ ले योजना तर्जुमाका लागि बिहीबार आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा वडाबासीले खेतियोग्य जमिनवाट उत्पादन बढाउनका लागि सिंचाइको व्यवस्थापन गर्न वडालाई सुझाव दिएका हुन । खेती योग्य जमिन भएर पनि सोचेजस्तो उत्पादन नभएका कारण उत्पादन बढाउन डिप बोरिङको व्यवस्थापन गरी सिंचाईलाई सहज बनाउन वडाबासीले आग्रह समेत गरेका छन् । वडा भित्र यो आर्थिक वर्षमा न्यूनतम ६ वटा डिप बोरिङ तयार पार्ने योजना रहेको वडा अध्यक्ष लिला वहादुर गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
छलफलमा शिक्षालाई समेत प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाउन सुझाव दिएका छन् । वडा भित्रका स्कुलको संरचनालाई ख्याल गरेर भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न सुझाव दिएका हुन । यस्तै वाटोको व्यवस्थापन, ढल निर्माण, फोहोर व्यवस्थापनलाई समेत योजनामा थप गर्न सुझाएका छन् ।
यो पटक प्रत्येक वडाले एककरोड २५ हजार रुपैयाँ बजेट माग गर्ने तयारी समेत गरिएको वडा अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिनुभयो । यस अघिको आर्थिक वर्षमा वडा अध्यक्षले खर्च गर्न पाउने गरी ४० लाखको बजेट विनियोजन गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
छलफल कार्यक्रममा वडाका सर्वसाधरण, टोलविकास संस्थाका प्रतिनिधि, स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, विभिन्न सामाजिक संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागीता थियो । वडा अध्यक्ष लिला वहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा वडाका जेष्ठ नागरिक सूर्य गुरुङ प्रमुख अतिथि रहनुभएको थियो ।